soomaaliya – Janaay Media
07:31: PM Wednesday August 21, 2019
Isku dhac labo ciidan oo ka wada tirsan Al-shabaab oo ka dhacey Tuulada Qasax Oomane.
Posted by Abdikadar Hassan - April 1, 2019
Wararka naga soo gaaraya Degmada Berdaale ee Gobolka Bay ayaa waxaa ay sheegayaan in isku dhac u dhexeeya labo ciidan oo ka wada tirsan Al-shabaab oo ka dhacay Tuulada Qasax Oomane oo ka tirsan Degmada Berdaale ee Gobolka Baay. Isku dhacaas oo ay ku dhinteen ilaa 16 sarkaal oo ka tirsan Al-shabaab, halka ay tubaneeyo
Shir looga hadlayo mideynta Waxbarashada Dalka oo maanta ka furmaya magaalo madaxda gobalka Baay ee Baydhabo
Posted by Abdikadar Hassan - March 30, 2019
Magaalada Baydhabo ee xarunta Ku meel gaarka ah ee Dawlad-goboleedka Koofur Galbeed Soomaaliya ahna magaalo madaxda gobalka Baay ayaa saaka waxaa ka furmaya shir looga hadlayo midaynta Waxbarashada dalka, kaas oo ay ka qayb-galayaan Wasaaradda Waxbarashada dalka iyo wakiillo ka socda Dawlad goboleedyada. Shirkan waxaa diiradda lagu saarayaa sidii Manhajka Waxbarashada Dalka loo midayn lahaa,
Al-shabab oo xalay weerar ku qaaday saldhigyo ay ciidamada doowlada ku leeyihiin degmada Qoryoleey
Faah faahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo xalay ka dhacay duleedka degmada Qoryooyle ee gobolka Sh/ Hoose. Dagaalkan ayaa yimid, kadib markii Al Shabaab weerar xoogan ay ku qaadeen saldhigyo Ciidamada dowladda ay kuy leeyihiin inta u dhexeysa deegaanada Kabtan Laas iyo Gaaywarow ee gobolkaasi. Ma cadda illaa iyo hadda khasaaraha
Al-shabaab oo gobalka shabeelada dhexe dab ku qabadsiiyay gaadiid dhuxul siday
Wararka ay Jinaay Media ka heleeyso Gobolka Shabeellada dhexe ayaa sheegaya in dagaalamayaasha Al-shabaab ay gubeen Gaadiid dhuxul u soo siday Magaalada Muqdisho. Gaadiidkan ayaa labadii maalin ee ugu dambeysay waxaa lagu gubay inta u dhaxeysa Magaalooyinka Jowhar iyo Balcad, waxaa la sheegay in ay gaarayaan ilaa Saddex gaari,kuwaas oo dhuxul u soo siday Magalada
Qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho oo xiran+Ciidamo Gaadiid Dagaal Wata oo Lagu Arkayo
Ciidamadda amaanka Dowladda Fedraalka Soomaaliya ayaa saakay xiray qaar kamid ah Wadooyinka Magaaladda Muqdisho. Waxaa sido kala wadooyinka lagu arkaayay ciidamo farabadan iyo gaadiid dagaal. Wadooyinka xiran waxaa kamid ah isgoysyadda Tarabuunka, Soobe,Banaadir, howlwadaag iyo sidoo kale wadooyin kale oo muhiim ah oo ku yaala Magaaladda muqdisho. Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska ayaa lagu soo
Maamul gobaleedka Puntland oo sheegtay in biyo dhaamin u sameeynayan deegaanada ay abaarta saameeysay
Posted by Abdikadar Hassan - March 29, 2019
Cali Xassan Axmed (Sabareey) Wasiirka Warfaafinta Maamulka Puntland ayaa sheegay in golaha wasiirada maamulka Puntland ay ku dhawaaqeen in 200 oo booyado biya ugu deeqeen Shacabka ku nool degaanno ka tirsan Puntland oo abaar iyo biya la’aan daran ka jirto, inkastoo aysan magacaabin deegaannadaasi. Wasiirka warfaafinta maamulka Puntland ayaa sheegay in xukuumaddu ay 200 oo
Maamul gobaleedka Galmudug oo sharuud ku xirtay heshiis ay la gasho Dowladda Federalka ee Soomaaliya
Hogaanka Maamulka Galmudug ayaa faah faahin ka bixiyay kulamo saacado badan qaatay oo ay la yeeshayn Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye, kulamadaas oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. War-saxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyada Galmudug ayaa lagu sheegay in kulan mira dhalkiisa rajo wanaagsan ay ka qabaan hogaanka Galmudug in ay
Maamul gobalaeedka Puntland oo soo bandhigtay qorshe lagu sugayo amaanka Magaalada Boosaaso
Posted by Abdikadar Hassan - March 28, 2019
Kulan masuuliyiinta dhinaca Amniga ee maamulka Puntland ay ku yeesheen magaalada Boosaaso ee gobalka Bari ayaa looga hadlay amniga magaalada iyo sida loo xaqiijin karo xili amaanka magaalada bilihii la soo dhaafay uusan aheyn sidii loo baahnaa. Saraakiisha hay’adaha amniga ayaa sheegay in iyada oo laga fakarayo Amniga Boosaaso la qorsheeyay hanaan lagu sugayo amniga
Ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku soo dhigay nin miino dhulka ku aasayay
Ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku dhigay nin miino ku aasayay mid ka mid ah waddooyinka degmada Dharkeenley ee Gobolka Banaadir. Howlgalkan ayaa waxaa sameeyay Ciidamo ka tirsan Booliska qeybta Galbeed ee Gobolka Banaadir, waxaana gacanta lagu soo dhigay nin dadka deegaanka ay ku sheegeen inuu Miino dhulka ku aasayay. Wararka ayaa sheegaya in howlgalkan ay